६० वर्षमा पनि पूरा भएन कान्ति लोकपथ, निर्माण कछुवा गतिमा - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
६० वर्षमा पनि पूरा भएन कान्ति लोकपथ, निर्माण कछुवा गतिमा
माघ १६, २०७४ 2030 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
काठमाडौंबाट हेटौडा जान छोटो दूरी तथा वैकल्पिक मार्गका रूपमा झन्डै ६ दशकअघि निर्माण सुरु भएको कान्ति लोकपथ अझै पूरा भएको छैन । भौगोलिक विकटता, सरकारको लापरबाही र स्थानीय समस्याले सडक अझै निर्माणकै क्रममा छ ।
लामो अवधिसम्म जम्मा ६० प्रतिशतमात्र काम पूरा भएको कान्ति लोकपथ सडक योजनाका इन्जिनियर नरेन्द्रप्रसाद भट्टले बताए । ९० किलोमिटर सडक ललितपुर टीकाभैरबदेखि मकवानपुर बुद्धचोकसम्म जोडिएको छ ।
हालसम्म ललितपुरमा १.५ र मकवानपुरमा १० गरी साढे ११ किलोमिटर खण्डमात्र कालोपत्रे भएको छ । चालू वर्षभित्र ललितपुरमा १४ र मकवानपुर १५ गरी २९ किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसपछि कालोपत्र सडक साढे ४० किलोमिटर पुग्नेछ ।
बहुवर्षीय ठेक्कामार्फत कन्टेक प्रालि, एससिसी मोतिदान जेभी, महालक्ष्मी एन्ड ब्रदर्स जेभी, कञ्चनजंगा गोल्डेन ग्रुप, हनुमान कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिइएको छ ।
सडक सञ्चालन भएपछि ललितपुर सातदोबाटो (चापागाउँदोबाटो) हुँदै सुनाकोठी, चापागाउँ, टीकाभैरब, तीनपाने भन्ज्याङ, झाँक्रीडाँडा, छपेली, काल्चे, बागमती नदी, बगुवा, ठिंगन, मकवानपुर आलेभन्ज्याङ, बुद्धचोकसम्म (९० किमी) ३ घन्टामा पुग्ने सकिनेछ ।
सडकले उत्तर–दक्षिण लिंक काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, निजगढ विमानस्थल, सिमरा नजिक बन्ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) लाई समेत सहयोग पुर्याउने अपेक्षा छ । तर, निर्माणमा भएको ढिलाइले स्थानीयबासी चिन्तित देखिएका छन् ।
हालसम्म आयोजनाले ८६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ । यस्तै, निर्माण पूरा हुँदासम्म करिब ३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ ।